Inzwa yeminwe ephantsi kwesikrini seGPS S10 yahlukile kwezinye | I-Androidsis
El Inzwa yeminwe phantsi kwesikrini yenye yezona zinto zintsha zintsha yangoku kwiselfowuni, njengoko iya kuba kwi-Samsung S10 ye-Samsung. Kwaye iya kuba yeyona nto iphambili kuluhlu lwenkampani yaseKorea eya kwahlulahlula abanye ngesizathu.
Kwaye i-Galaxy S10 ayisiyiyo yokuqala ukuzisa inzwa yeminwe phantsi kwesikrini, kodwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo Siyibonile kwiHuawei Mate 20 Pro entsha. Ke silapha ngaphambili enye yeendlela zeminyaka ezayo ide ifike kwii-mobiles ezisezantsi.
1 Isimanga sikaSamsung
2 Imali eninzi nge-Samsung enezixhobo zayo zeminwe zeminwe
3 Umahluko phakathi kwe-ultrasonic kunye ne-optical
Ummangaliso wokwenene uya kuba kukuba i-Samsung iphuhlisiwe inzwa efanayo yeminwe eya kuthi ibekwe kwiscreen esinye. Kwaye yinkampani yaseKorea esele inelungelo lobunikazi ngo-Epreli itekhnoloji ye "sensor yebhayometri kunye nesixhobo kubandakanya okufanayo."
Kwakunjalo namhlanje xa ipatent echazwa ngayo yayipapashwa ukusetyenziswa kwe-in-display ebonakalayo yeminwe yokuskena. Ukuqonda ukusebenza koluvo lwoluvo, kufuneka kuqondwe ukuba xa usebenzisa eyomeleleyo kufuneka kugcinwe umgama ohleliyo phakathi kwesenzi kunye nescreen.
Ngenxa yexesha kunye nokubethwa kweso sixhobo, umgama phakathi kwescreen senzwa ungahluka, kwaye kulapho inzwa iya kuncipha ekusebenzeni ixesha. Ukuthintela oku, iskena sokuprintwa kweminwe sicwangcisiwe kwikhadi elinesekethe eprintiweyo, apho kukho ukuvulwa kwesenzi. Ngale ndlela, inzwa yeminwe yeminwe inokufumaneka kumgama okhuselekileyo ukusuka kwiscreen.
Imali eninzi nge-Samsung enezixhobo zayo zeminwe zeminwe
Okwangoku Inkampani yaseKorea yenza isixa esikhulu semali ngokuthengisa iinkumbulo kunye nezikrini. Kwaye kwinto esinokuyithelekelela kumalungelo awodwa abenzi abenziweyo i-Samsung ibipapasha inxulumene neskena seminwe eskrinini, kubonakala ngathi ibonisa ukuba inkampani yaseKorea ukukhangela indlela yokuzimela ngokupheleleyo, endaweni yokuthenga enye kwinkampani yomntu wesithathu.
Into ehlekisayo ngayo yonke loo patent yile soloko ndinoluvo olubonakalayo njenge-axis esembindini, ishiya bucala inzwa yesinyithi. Ngelixa luhlobo olufanayo lwenzwa esetyenziswa yiHuawei, Oppo kunye neXiaomi.
Umahluko phakathi kwe-ultrasonic kunye ne-optical
Umahluko phakathi kweenzwa ezahlukeneyo ulele kwimiba eliqela ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Inzwa ye-ultrasonic inokusebenzisa Isikrini sonke ukurekhoda unyawo lomsebenzisi, ngaphandle kokusebenza ngcono xa isikrini simanzi okanye singcolile. Ekuphela kwento ethi ezi zivamvo zibe "novakalelo" ngakumbi kutshintsho lobushushu nomoya.
Kwelinye icala sinesivamvo i-optical ekhawulezayo kwaye ichaneke ngakumbi. Ezi mpawu zimbini zizizathu zokuba kutheni i-Samsung ingafaka inzwa yeminwe kwicala langaphambili kwi-Samsung Galaxy S10 yayo elandelayo. Ukuchaneka kwayo kunye nokuthembeka kwayo nakweyiphi na imeko yeemeko zizizathu ezibini zokuba inkampani yaseKorea ikhethe olu hlobo lwenzwa.
Kwaye ukuba iyenza ukuba ibe yimpumelelo, inkampani yaseKorea sele inayo omnye umthombo omkhulu wengeniso, kuba ziya kubakho iimveliso ezininzi, nkqu nezinye ezinje ngeApple, LG okanye iHuawei, abo ekugqibeleni banokuthi bakhethe ukuthembeka kweenzwa zeminwe phantsi kwescreen seSamsung.
Sele yenzekile ngeenkumbulo kunye nescreen, kungoko kungekho mntu umothusayo kukuba inkampani yaseKorea ityale imali eninzi kunye nexesha ukuze yiza nenzwa yeminwe phantsi kwesikrini kwiifowuni zethu. Ewe unokubeka umnwe wakho kwiscreen kwaye uye ngqo kwidesika yakho kwishumi lemizuzwana ukwenza imisebenzi yakho yemihla ngemihla nge-smartphone yakho; Logama nje kungathathi xesha lide ukwazi iimpawu ezinokubakho Iikhamera ezintathu iGPS S10 iya kuba nazo ngasemva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Nantsi indlela isivamvo somnwe ophantsi kwescreen seGPS S10 ohluke ngayo kwezinye
Iimaphu zikaGoogle sele zibonisa amanqaku okutshaja kwizithuthi zombane